Kanneen Oromiyaa Keessatti Ajjeechaalee fi Yakka Biroo Raawwatan irratti Tarkaanfiin Seeraa Fudhatamuu Qaba, Jedha Mootummaan Naannoo Oromiyaa
Muddee 13, 2017
Godinaa Harargee Bahaa, magaalaa Calanqoo keessatti haala gaddisiisaa uumame irratti kan ibsa kenne – mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa namoonni hiriira nagaa bahan ajjeesamuu isaanii fi 14 immoo madaa’uu dubbate. OBN yokaan Oromia Broadcasting Network-f ibsa ka kennan – Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa – Obbo Lammaa Magarsaa, “qaamonni gochaa kanaaf itti-gaafatamoo ta’an akka seeratti dhihaachuu qaban hubachiisan. Yunivarsitii Wallaggaa, mooraa Shaambuu keessatti haleellaa sab-lammii adda baasee geggeessamee kanneen raw’atanii fi barattoota bulchiinsa naannoo Tigiraay lama ajjeesan irratti tarkaanfiin seeraa barbaachisaan akka fudhatamu mirkaneessanii jiran. Ibsa Prezidaantichaa ilaalchisuudhaan, gabaasaa keenya – Eskindir Firew-f kan gaaffii fi deebii kennan – Itti-gaafatamaan waajira dhimmoota koomiyunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa – Obbo Addisuu Araggaa --- “Ahmeddin Ahmed Asaasaa namni jedhamu humna Liyyuu Hayil, ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeesamuu isaanii tu, hiriira nagaa magaalaa Calanqootti geggeessame sanaaf sababaa tahe – jedhu. Tarkaanfiin hiriirtota irratti fudhatame garuu, gochaa sirrii miti – jechuudhaan, yaada prezidaantichaa ibsaanii jiran.
‘Balfi Galaanatti gatamu faalama bishaan galaanaa dabaluutti jira’ Jaarmayaa Mootummootaa